Zavatra 8 Tianao Ho Fantatra Momba An’i Madagasikara Saingy Tsy Sahinao Nanontaniana · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Savannah Goyette
Voadika ny 29 Septambra 2014 14:06 GMT
Vakio amin'ny teny polski, Português, srpski, Español, русский, English, 繁體中文, 简体中文, 日本語, Română , Français
Madagasikara no nosy fahefatra goavana indrindra eran-tany eo amin'ny habe, kanefa mbola zava-miafina ho an'ny maro izy. Tato ho ato dia nifantoka taminy ny sain'ny olona noho ny fitsidihan'i Valérie Trierweiler, mpiara-miasa taloha tamin'ny filoham-pirenena Frantsay François Hollande ary mpanoratra ilay boky nahalafo be indrindra “Merci pour ce moment” (Misaotra anao noho ity fotoana ity), Madagasikara dia manitikitika noho ny fahasamihafan'ny zavaboariny sy ny fipetrahany ho mpampifandray an'i Azia sy Afrika.
Miankina amin'izay ametrahanao ny fanontanianao izany. Araka ny Banky Iraisam-pirenena, 90 isanjaton'ny vahoaka Malagasy no mampiditra latsaky ny 2$ Amerikana isanandro. Tahaka izany ny tsy fitovian-karena any Madagasikara hany ka tsy dia misy fomba fiaina mahazatra tena horesahina. Manazava io tsy fitoviana io Randriamihaly, mpitoraka bilaogy any Madagasikara:
Hery Martial Rajaonarimampianina Rakotoarimanana no filohan'i Madagasikara nanomboka ny Janoary 2014. Araka ny voalazan'ny The Guardian, ny anarany no lava indrindra amin'ireo anaran'ny mpitarika eran-tany ankehitriny. Tsy moramora ny manonona izany, na ho an'ny Malagasy aza. Raha sendra mihaona amin'ny filoha ianao, hevitra tsara kokoa ny mampiasa ny anaran'ny antokony Hery Vaovao rehefa miantso azy toa izay hisisika hanonona diso ny anarany ka hiteraka fahasahiranana ara-diplômatika, na raha tsy izany dia omeo jiro entin-tànana izy mba hialàny amin'ireo fanahiany ny herinaratra mandavan-taona. Saingy raha tena mikiry ny hanonona ny anarany ianao, ito no fomba tokony hilazanao izany (eo amin'ny 0:09 ao anatin'ny lahatsary) :
Tanatin'ireo andro vitsivitsy lasa dia feno tantaram-pahantrana, olana ara-pahasalamana, tsy fandriam-pahalemana sy halatra an-dalàmbe ireo vaovao avy any Madagasikara. Mbola vaovao tsy afaka an-tsain'ny vahoaka ny tsiaro an'ireo vazaha roa (vahiny fotsy hoditra) niharan'ny fitsaram-bahoaka tany amin'ny nosy Malagasy, Nosy Be. Etsy andanin'izany, fiainana tsy misy toa azy izay ataon'ireo mpizahatany sy ireo Malagasy isan-taona ny fandehanana an-tongotra mitety ny nosy.
Ny tazomoka no aretina mandrahona voalohany ny fahasalamana. Voasokajy anatin'ny faritra faha-3 ny firenena iray manontolo, izay midika fa afaka manohitra ny “chloroquine” (fanafody manohitra ny tazomoka, matetika fampiasa eran-tany na amin'ny fisorohana izany na amin'ny fitsaboana) ny selan'ity tazomoka fahita àny ity. Hita anatin'ny 90 isanjaton'ny faritr'i Madagasikara ny tazomoka. Ireto misy torohevitra vitsivitsy hiarovan-tena: (avy amin'ny “Le Guide du Routard”, torolàlana fanta-daza mikasika ny fizahantany ho an'ireo mpizahatany miteny frantsay):
Hita any Madagasikara ihany koa ny Bemangovitra sy ireo aretina hafa any an-tany mafana. Mitovy amin'ny any amin'ny firenen-kafa ihany ireo fepetra fototra hisorohana azy ireny. Raha ny mikasika ny tsy fandriampahalemana, tsy misy antontanisa ofisialy momba ny heloka nivoaka any Madagasikara, saingy tafapetraka anatin'ny feon'ny eritreritry ny olona izany, hany ka misy fiantraikany ratsy eo amin'ny fizahantany. Manolotra ny heviny i Mofo Lany, izay mipetraka any Antananarivo renivohitra:
Ary ho an'ireo fanamby kosa, dia mizara ny zava-niainany tamin'ny fianarana ny teny Malagasy i Lilikely, amin'ny maha-vazaha (fiantsoana ny “vahiny” amin'ny teny Malagasy) azy:
Ahoana ny fomba hianarana? Ireto misy loharano vitsivitsy hianarana an'io teny io: ireo fototra ao amin'ny mylanguages.org ho an'ny mpiteny Anglisy, ary ny Gasikara.net ho an'ny miteny Frantsay, ny torolàlana amin'ny tafatafa avy ao amin'ny Wikitravel ho an'ny miteny Anglisy ary ny Assimile ho an'ny miteny Frantsay ary ny fanarahana fampianarana manokana ho an'ny tena (raha ilaina) sy ny fanazavana ireo marim-potoana.
Ah, ilay fanontaniana tsy mety miala! Ity no fotoana hiresahantsika ireo fanontaniana mampiady hevitra be mikasika an'i Madagasikara. Azo ihany ity fanontaniana manokana ity satria eo anelanelan'i Afrika sy Azia mihitsy no misy ilay firenena ary maro karazana tokoa ny mponina ao aminy. Ara-drariny araka izany ilay fanontaniana. Ny olana dia ny adihevitra mitranga aorian'io fanontaniana io–matetika dia mivilana ho resaka tsy loa-body maneho fanavakavahana sy fitsaratsaram-poana amin'ny endrika samihafa ny adihevitra momba io fotokevitra io. Raha tena tia karokaroka ianao ka mahay mamaky teny Frantsay, i Dominique Ranaivoson, mpampianatra mpikaroka sady manam-pahaizana amin'ny literatiora Malagasy, dia nanoratra bebe kokoa mikasika io fotokevitra io amin'ny teny Frantsay. Iray amin'ireo zavatra tokony ho fantatra ny fisianà fokon-drazana 18 any Madagasikara, izay ahitàna vahoaka avy any Afrika, Azia ary Arabia. Ny zava-misy iray hafa dia ny fisianà karazanà fanavakavahana miafinkafina eo amin'ireo vondrona Malagasy samy hafa ireo.
Ah, ilay fanontaniana mampiady hevitra iray hafa! Ny famadihana, na “famadihana ireo taolana,” dia fomban-drazana eo amin'ny sehatry ny fandevenana hanomezam-boninahitra ireo razambe. Ity misy fanazavana io fombafomba io omen'i Lay avy any Antananarivo:
Fotoana iray koa ahafahana manao lanonana izany ho an'ny fianakaviana. Tsy mifandray aminà fomba ara-pinoana izany any Madagasikara, saingy tsy ialàn'ny adihevitra. Manazava ny antony nahatonga ny zanany lahy noforaina i Ariniaina:
Tsy misy. Raha ny marina, zavatra roa: 1) Tena nitsinjaka tamin'ny “I Like to Move It, Move It” ireo toeram-pandihizana amin'ny alina any Madagasikara tamin'ireo taona 90. 2) Nanolotra fanampiana mitentina $500 000 Amerikana ho an'ny fikambanana tsy mitady tombontsoa, “Conservation Internationale” ho fampiroboroboana ny fizahantany mitandro ny zavaboary any Madagascar i Jeffrey Katzenberg, talen'ny “Dreamworks”, ilay orinasa namokatra ireo fizarana telon'ny horonantsary “Madagascar”.